Maalinta: Meey 2, 2020
Ku dhawaad ​​20 kun oo Doomood ayaa Dhex maray Wadooyinka Turkiga
Turkey tirokoobka Institute (TSI) bilood ee hore ee 2020, sida ku cad xogta ka Strait Istanbul hadda 9 kun 734 maraakiibta ahaa. 6 kun iyo 448 maraakiibtaas ah waxaa qabtay pilot inta lagu gudajiray. Dhererka 200 mitir [More ...]
Ümraniye Göztepe Metro ee Adeegga Magaalada Istanbulites sanadkii 2022
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu wuxuu baaray daraasado ka socda goobta oo magaalada dhexdeeda intii bandoowgu jiray. İmamoğlu wuxuu baaritaan ku sameeyay dhismaha garoon ku yaal magaalada Ataşehir, biyaha wasakhda ah ee Ümraniye iyo baarkinada dabaqyada badan ee insküdar. Ilaa iyo 2017 [More ...]
Tirada kiisaska coronavirus-ka adduunka ayaa soo dhowaatay 3 milyan 370 kun
Nooca cusub ee coronavirus ee ka soo ifbaxay magaalada Wuhan ee gobolka Hubey ee Shiinaha, ayaa u gudbiyey in ka badan 3 milyan 370 kun oo qof oo adduunka ah, iyadoo dhimashaduna ay gaareyso 239 kun. Dalka Mareykanka oo ah halka uu cudurka faafa uu sida ugu badan u saameeyay [More ...]
55 Million Xaaladda qeybiyey maaskaro Koronavirüsl Argagixisada ee Turkey
Madaxweynaha isgaarsiinta Fahrettin Altun wuxuu sheegay in 55 milyan oo mask ah loo diray farmasiyada inta ay gaarsiisan tahay la dagaallanka coronavirus. Altun, warbaahinta bulshada xisaabay "coronavirus ee Turkey" war qoraal ah oo ay horyaalka, sii wadaan in ay keeni dadka ajnabiga ah dalalka ugu allabari weyn [More ...]
Wadada Tareenka Waddan ahaan 7 Bilyan Oo Euro Oo Amaah Loogu Soo Celinayo Air France
Dowladda Faransiiska waxay dejisay "tareenka" bedelka 7 bilyan euro ee deynta ah ee la siinayo Air France. Sidaas awgeed, haddii socotada ay leeyihiin tareen kale, duullimaadyada waxaa laga codsanayaa inay yareeyaan duullimaadyadooda khadkaas. [More ...]
Shaqo ayaa socda si dib loogu furo suuqyada dukaameysiga ee u xirnaa fayraska corona dartiis. Daraasadda dhexdeeda, waxaa la bartay in dad dhowr ah ay u furi doonaan suuqyada wax lagu kala iibsado oo ay ka jiri doonaan aaladda laga cabbiro qandhada. Fayraska Corana ee dillaacay [More ...]
Turkiyiin magacooda ku qornaa Daawada adduunka
Dadka reer Turki ee hogaamiya sayniska caafimaadka isla markaana magacooda ku qora caafimaadka adduunka. Dhakhaatiirta ku sugan Göktürk, Biguta ee Haruks iyo Aaron ee Karluk ayaa ka mid ah dhakhaatiirta aan la ilaawi karin ilaa iyo sanadkii 728 AD. Mawduuca buugaagta caafimaadka, Beerka [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri, iyada oo garaneysa fursada lagu soo rogi karo bandoow, waxay ku damacsan tahay wadooyinka baabuurta cufnaanta maalmaha caadiga ah. Duqa Magaalada Caasimadda, oo booqday kooxaha ka shaqeeya Sivas Street. Mamduux [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa, oo bandowgu u rogay fursado ka jira Bursa oo ka dhigtay ku dhawaad ​​30 kun oo tan oo hawo kulul ah labadii todobaad ee la soo dhaafay, sidoo kale inta lagu gudajiray xayiraada oo daboolaysa 1-2-3 May. [More ...]
madaxtooyada Sözcüİbrahim Kalın wuxuu ka hadlay golahan cinwaankiisu yahay “Mustaqbalka Idlib iyo dadka soo barakacay ee Siiriya” oo ay soo qaban qaabisay Golaha Atlantic ee fadhigiisu yahay Washington DC. Hadalka geesinimada leh, Patriot ee Erdogan iyo Trump dhowr jeer [More ...]
Maamulka Gobolka Istanbul wuxuu qabanqaabiyay riwaayad Kıraç gaar ah oo loogu talagalay Maalinta Shaqaalaha iyo Maalinta Nabadda. Riwaayadda waxaa si toos ah looga baahin jiray idaacadaha iyo telefishanka iyo xisaabaadka warbaahinta bulshada. Khaas ah Maalinta 1aad ee Shaqaalaha iyo Wadajirka [More ...]
Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta, Agaasinka Guud ee Dhirta (OGM) ayaa soo gabagabeeyey diyaar garowgii ay ugu jirtay la dagaallanka dabka kaymaha. Dalkeenna, gaar ahaan kaynta xeebta ah ee ka bilaabaneysa Xatay oo ku fidsan gobollada xeebta Mediterranean iyo Aegean illaa Istanbul. [More ...]
Wasiirka Warshadaha Difaaca Madaxweynaha. Dr. Shirkadda İsmail Demir ayaa saxeexday iskaashi dhexmara duullimaadyada hawada ee Turkiga iyo Warshadaha Hawada (TUSA and) iyo HAVELSAN, kuwaas oo fuliya hawlo horumarineed iyo wax soo saar oo loogu talagalay Diyaaradda Dagaalka Qaranka (MMU) [More ...]
Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan, nooc cusub oo corona (Kovid-19) muhiimadda ay leedahay habka of digitalisation in dagaalka ka dhanka ah cudurka xusay in mar kale soo jeedisay, "maalgelinta Digitalization iyo technology in la sameeyo oo duurka ku, ugu yaraan for Turkey iyo dunida [More ...]
Hawlgalkii ay fuliyeen kooxdii fulinaysay Wasaaradda Kastammada Ganacsi ee magaalada İzmir, 1 kun 15 litir oo khamri ah oo ay ka mid yihiin 117 milyan oo TL ah ayaa la qabtay, iyadoo hawlgal kale laga fuliyey albaabka Kastamka Edirne Hamzabeyli. [More ...]
Madaxweyne Soyer wuxuu booqdaa shaqaalaha Asphalt wuxuuna u dabaaldegayaa Maalinta Shaqaalaha ee 1-da May
Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer wuxuu booqday shaqaalihii aas aasay markay ahayd 23.00 habeenimo una dabaaldegay 1-dii May, İşçi Bayram, wuxuuna u fidiyay baklava. Kooxahan qiimeynaya bandoowga sida caadiga ah lama xiri karo gebi ahaanba [More ...]
Wakaaladaha loogu jecelyahay Hay'adaha Dalxiiska Dalxiiska ee Corinthians
Qaybta ugu wanaagsan ee gobolka Isthmus ee Korintoon waxaa loo xushay inay qodaan kanaalka. Dhismuhu wuxuu u dhexeeyaa 1881 iyo 1893. Dhererkeedu waa 6,3 kiiloomitir wuxuuna isku xiraa Gacanka Korinti iyo Gacanka Saronic. Giriiggu waa kaftamaan [More ...]
Maanta taariikhda: 2 May 1943 Zonguldak-Kozlu
Wuxuu faray dhismaha wadada tareenka ee Hejaz ee Abdülhamid II bishii Maajo 2, 1900 taariikhda. Suldaan Abdulhamid; "Dhismaha Hatt-ı Mezkur, kaas oo ku saleysan caawinta ilaahay Qaadirka ah iyo caawinta Rasuulkeena Alle (SAV)." [More ...]